Hlola iMikumi National Park, eTanzania - World Tourism Portal
Hlola iMikumi National Park, eTanzania
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeMikumi
Bukela ividiyo emayelana neMikumi
Hlola iMikumi National Park eSouthern-Central Tanzania. Ipaki inamathafa amakhulu avulekile otshani, afana ne ISerengeti.
Izinhlobo eziningi zezilwane ezifanayo zibonwa ngaphakathi IRuaha. Into engajwayelekile kakhulu izindlovu “ezihamba kancane”. Lokhu kubukeka njengendlovu evamile yase-Afrika kepha ayibukhulu obunciphile futhi anama-tile amancane namancanyana. Izilwane zasendaweni zithi lokhu kuyindlela yokusinda evikela umhlambi kubazingeli bezinyo lendlovu njengoba isikhumba esincanyana senza lesi silwane singafuneki kubazingeli.
IMikumi National Park icishe ibe yi-250km entshonalanga neDar es Salaam futhi iyipaki likazwelonke eliseduzane edolobheni. Ukushayela lapho kuthatha cishe amahora we-4 ngenxa yezimo ezingezinhle zomgwaqo.
Izinkampani zokuhamba nezinkampani zokuvakasha zingahlela izinto zokuhamba eziya eMikumi futhi ziye epaki. Kufanele uqinisekise ukuthi imoto esetshenzisiwe iyi-4 × 4 ethembekile, isib iLand Cruiser neRange Rover. Ayikho i-Rav4 nama-CRV. Yize kungenzeka ukuba udabule iningi lemigwaqo emikhulu ene-sedan, ngeke uthole umuzwa omuhle kakhulu wokubona.
Imali / izimvume
Imali yemvume yokupaka isivakashi ibiza u- $ 20US umuntu ngamunye futhi isebenza amahora angu-24 kusukela ngesikhathi sokuthenga. Uxwayiswe ukuthi abangezona izakhamizi kulindeleke ukuthi bakhokhe imali yokungena epaki ngamakhadi wesikweletu ngamadola aseMelika hhayi ama-Shillings aseTanzania. Izivakashi kumele zingene ngaphambi kwe-4pm bese ziphuma ngaphambi kwe-7pm. Abahlala kwesinye sezinto zokugcina ipaki kumele babuye ekamu nge7pm.
Uma unemoto yakho ye-4 × 4, mane ucele indawo yakho yokulala ukuthola imephu yezindlela. Azikho izindlela eziningi epaki futhi imigwaqo eminingi yesibili ivaliwe ngesikhathi semvula. Ichibi lemvubu lihlala liyindawo enhle yokubona izilwane. Uma uchitha izinsuku ezimbili ushayela epaki kufanele ulindele ukubona amabhubesi, izindlovu, izindlulamithi, izinyathi, amadube, izimvubu, izingulube, izimpisi zasendle, amabala amade, namanani amaningi ezinyoni. Lapho ungena epaki, buza onogada esangweni ukuthi yiziphi izindawo ezingcono kakhulu zokubukwa ngalolo suku nokuthi bake babona noma ibaphi amabhubesi. Futhi, funa amabala ajikelezayo, akhombisa isilwane esifile. Njengoba kushiwo, amabhubesi akhona, kepha kungenzeka ungawaboni, ngoba awami ngombono. Lapho bezingela ezinye izilwane, bavame ukusuka kulezo ezigulayo noma ezibuthakathaka lapho benza njalo. Bazingela ngokuziqhenya kwabo emgodini wabo. Zingahamba izinsuku ze-4 ziye kumaviki amabili phakathi kokuzingela. Bangaba omnivores kwezinye izimo. Kuphela ibhubesi elingatholakali / eliwohlokile elizolandela abantu, ngokujwayelekile bayobaleka kubo. Lezo ke ziyalandelwa futhi zibulawe njengoba ziyingozi.
Uma uhlela ukuqasha imoto phakathi Tanzania futhi uzishayele eMikumi uzilungiselele uma kwenzeka wephuka noma ingozi.
UNGAVAKI epaki likazwelonke ngaphandle kwethangi lika-petrol OTHILE. Kufanele futhi ube ne-jerry ephuthumayo enamandla okungenani amalitha we-20 nethayela eligcwele losayizi uma ulimaza uthaya wakho endaweni ekude futhi udinga ukushayela endaweni enzima.
Eminye imishini yokuletha ifaka intambo yethayela, ifosholo, imashi, ithoshi (ithoshi), ikhithi losizo lokuqala namanzi okuphuza angaphezulu kokulibaziseka okungalindelekile.
Noma kungenzeki kakhulu ukuthi uzoba nobunzima uma kufanele ushintshe ithayi elisepaki, qaphela ukuthi ezinye izilwane zasendle zingabazingeli. Musa ukuduka kude kakhulu nemoto futhi ugcine izingane ngaphakathi ngaso sonke isikhathi.
Izimpukane zika Tsetse: Ziningi kakhulu eMikumi. Zifana nezimpukane zasendlini kepha ziyahlaba. Ezingxenyeni eziningi zamahlathi zalesi paki, gcina amawindi akho evaliwe. Uma umuntu engena, abulale ngokushesha njengoba beshesha ukuluma. Ukulunywa yi-Tsetse fly kungaba yingozi ebantwini njengoba kungabathwali bokulala.